Dubai Jobs Recruitment & Career ne Top Companies muUAE 🥇
Wedzera Bhizinesi Rako kuDubai
putBaytBannerAds (1929440, '' bhodhibhodhi ',' en ')
Kubhadhara mabasa mu Dubai Ndiani watinenge tichitora? ⭐⭐⭐⭐⭐
Kushandisa To The Best Recruitment Agencies mu Dubai ????
Yakabudiswa na Dubai City Company at November 4, 2017
Uplod CV yeUS $ 5 chete - Unogona kuwana basa kuUAE, Qatar kana Saudi Arabia
Shingairira Mabasa muDhailand
Dubai Mikana Mikana. Pamusoro pevashanyi ve25,000,000 chinhu chimwe chete muUnited Arab Emirates a Mabasa mu Dubai. Nokuda kwechikonzero ichi mapurisa emabasa mu Dubai kutarisira kuwana vazhinji vanotsvaka basa sezvavanogona kubva kubva paIndaneti. Chinhu chokutanga chekuyeuka kune vose vanogadzirisa mabasa muDhaibha uye kune vanotsvaka basa muDhailand avo vari kuedza kutsvaga basa iri ku Dubai. Dubai City Company akaisa rumwe ruzivo nezveRekusvikira mabasa muDubai mu2018 aine izvi mupfungwa isu tichakutsigira uye kukutungamira iwe mukutsvaga kwako basa mune Brazil. Asi panguva ino, kambani yedu yatinoda kutanga kubva kutungamira uye pamusoro pehupfumi hweDubai uye inokupa rumwe ruzivo nezve makambani ekutsvaga ku Dubai uye Mumbai.
Pfuma yeUnited Emirates
The Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi kumberi ivo vachangotevera Saudhi Arabhiya. Kusvikira kunguva iripo, hupfumi hweUnited Emirates ndiyo yechipiri yeupfumi hukuru nokuda kwemabasa muSaudi Arabia pamusoro peGCC yenyika. Mukanguva kubva ku1996 kusvika ku2018 UAE inowedzera chibereko chakawanda chemuzinda (GDP) ye USD 770 mabhiriyoni (AED 3.1 trillion) mu2016. Kune rumwe rutivi, iwe unofanira uye tarisai makambani ekubhadhara. Nokuti vamwe vavo vari kukura muUAE. Semuyenzaniso, Careerjet-Dubai basa renzvimbo uye Nzvimbo yekutsvaga mawebsite. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Kune chikamu chikuru kunyange zvakadaro hupfumi muUnited Emirates Emirates zvakanyanya kuenderana nemafuta uye gasi mari. Sezvakataurwa kuti Dubai neAud Dhabi zvave zvichibudirira kubudirira kwehupfumi kubvira 1995. In kuguma kubva kumafuta, gesi uye petrochemicals sector, United Arab Emirates kukura kuti ive nyanzvi inoziva Arab Hotel industry. Pasi iwe unogona kuwana makambani akakurudzirwa kushanda For an kambani yakakosha kwaunokwanisa Upload Resume muUAE (uye Middle East)
Jobs Dubai - Top Companies kushanda Dubai
Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi Marriott International Hotel kambani inoshanda mukati memahofisi e5,700 munyika dzose. Panguva imwecheteyo, boka rehotera rakagadzira chirongwa chekutaura chinonzi In The Beginning. Nechinangwa chekuchangobva vakarovedza vatungamiri vechidiki. Kuti zvinhu zviitike, vatungamiri vatsva vanosangana neboka rekutungamira vanotarisira uye hotera dzimba uye zuva roga roga vanotanga kuziviswa kuenda kuhotera yeMarriott tsika, mitemo, nhoroondo uye kutengesa zvinangwa.
Ndiine Marriot International Hotel, pane mabasa akawanda anopa. Somuenzaniso, itsva vanobva kuIndia vanogona kuiswa mumusoro weUAE.
Sezvo mufananidzo wehotera raMariott rutsigiro, vashandi vavo vatsvawo akapiwa sarudzo yekushanda at Dubai City Mahotera hotera. Uye kana vakatarisira kufamba-famba munyika yose nekushanda ku Dubai. Chimwe chinhu chinokosha iyo kambani inobatsira vashandi kuti vafambe mberi mubasa ravo muhotera yose pamusika wepasi rose. Muchiitiko ichi, Marriott International Hotel imwe yekambani dzakanakisisa dzinotarisira nezvevashandi vavo.
Chinhu chokutanga chokuyeuka FedEx company anovimbisa basa rekufambira mberi kwevakadzi vanobva kuUAE. Uyezve, kambani inoziva inoshandiswa pabasa rake. Kutaura zvakanaka neFedEx vanobudisa vanhu-basa-purogiramu nzira yekufunga. Uchapupu hunonyanya kusimbisa uhu kuburikidza nekufambira mberi Mubayiro. Mukufamba kwenguva, Fed Ex kambani yenyika inoziva boka rimwe nerimwe nhengo iyo inofamba kupfuura zvinotarisirwa zvekambani. Pakupedzisira, mushandi mumwe nomumwe anovimbisa kuti zvinodiwa nevatengi zvinosangana nepamusoro-soro. Iyo kambani inotarisawo nokuda kwehutano hutsva muDaily City Area.
The kambani inyoresa basa mune 2018. Vashandi vemunyika yose vanotsvaka chete kambani iyi. Nokuti zviri nyore kwazvo kuiswa navo. Panguva imwe chete iyo firm inogamuchira maitiro akawanda emabasa pazuva. Saka CV yako uye tsamba yekuvhara inofanira kutarisa zvakanaka. Pane rimwe divi, kambani inobatanidzwa pasi rose. Somuenzaniso, unogona kuwana nzvimbo dzakanaka mukati meGCC nzvimbo neFedEx Express.
DAMAC Properties zvinhu zvose zvinofungidzirwa nekambani iyi inoshamisa uye neyo Top rated job website in Dubai. Sezvinoratidzwa pamusoro apa, DAMAC ndiyo inonyanya kukosha mukirasi yeMiddle East uye GCC yepamusoro yemisika yemashamba kubva 2002. Kazhinji kutaura, DAMAC Properties inopa zvinhu zvinoshamisa uye zvepamusoro zvekugara mu Dubai. The kuvhara mikana yekuwana maIndia pamwe nekambani iyi. Izvi zvinowedzera zuva rega rega mune zvekutengeserana uye zvekuchengetedza misika pamusika weMiddle East.
Pamusoro pechikamu chikuru chekambani yemabhizimisi eDAMAC kusanganisira United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Jordani, Egypt, Lebanon, Turkey, neUnited Kingdom misika yemari. Pamberi pacho, DAMAC Properties ndiyo inotungamirirwa nehupfumi hwemahofisi kweMiddle East Vacancies uye Emirates mabasa. Hapana mubvunzo mune kambani iyi inofanirwa kugovera dzimba dzorota kwete mu Dubai ne Abu Dhabi chete. Asi pamwe chete kuchengetedza mazano ehupenyu akasiyana ku Qatar kubvira 2015. Kune vatengi uye vanobva kunyika dzose mukati meUAE.
Rimwe remakambani anozivikanwa zvikuru muGulf area. Vazhinji vevaPakistani nevaIndia vanoenda kune dzimwe nyika. Kuedza kutsvaga basa rine DAMAC zvivakwa. Kune rumwe rutivi, kana iwe uchida kutsvaga basa muDubai. Iwe unofanirwa kufunga nezve DAMAC nekuti mukambani iyi mune mikana yakawanda for expats, saka tanga nevanotsvaka nyanzvi!.
Dubai Jobs ACC - reArabhiya Company Construction
ACC (Arabian Construction Company) akasika kuti aratidze Dubai zvivako simba. Acc yakavakwa muRebhanoni mu1967 asi zvirokwazvo, inotungamirira pakuvaka yakasimba munzvimbo yeGCC. Inofanira kuyeukwa kuti kambani yekambani inosanganisira zvizhinji zveMiddle East uye zviratidzo zveIndia uye zvigadzirwa zvepamusoro. The kambani inopa kufamba-mubvunzurudzo yevanotsvaka basa kubva kuUAE. Zvechokwadi, kwemakore 51 Makambani eArabia Construction, vane masimba makuru muUAE uye akaumba masikirini emaguta makuru akadai Dubai, Abu Dhabi, Doha, uye London. Kune rumwe rutivi, kambani yakaronga zvigadzirisheni nokuda kwechikwata chikuru chemabhizimisi.
Zvakare zvakare ACC yakavakwa zvishamiso zvehutano hwakanaka muQatar. Yakaisvonaka kambani ye hospitality hotels jobs in Dubai. Kunyange zvazvo uchitarisira $ 3,600,000 zvekutengesa uye mapurani ekugara mazuva ese. Asi chaizvoizvo sangano, chinonyanya kukoshesa ndechokuendesa michina yepamusoro apo uchichengetedza hutano hwakanyanya uye kuchengetedzwa kwehutano mumabhizimisi eArabic nyika mune ramangwana reMabasa mu Dubai.
Kambani yekuvaka yeAra Arabia yakanaka kwazvo kuvashandi vemuno. Simbisa kushanda nesimba kupa mabasa matsva muDubai kwe muIndiya. Tava kubatsira kuti uwane ruzivo rweA Dubai neAud Dhabi. Iwe unogona kuwana mikana yekurota maitiro mukati meUAE. Neichi company inoshamisa.
Dubai Jobs - Al Hokair Group
Mabasa muAl-Hokair Group senhau yekuti Alhokair boka ndiro zita rave richinyatsozivikanwa muDaily City ne Dubai yavo blog. Muchiedza cheArabs International kugamuchira vaeni uye varaidzo Alhokair boka rinotarisira mahofisi uye mabhizimisi mashamba makumi emakore. Iyo kambani mu Dubai inonyatsozivikanwa legit rubatsiro nemabasa ekutsvaga Dubai company. Uyezve, Al Hokair Fashion Retails uye yakavambwa mukusiyana apo UAE inotanga kuvandudza bhizimisi yakanga iri 1990. Sezvineiwo. kushanda kwekambani kwakapararira munzvimbo zhinji dzakasiyana-siyana kwete muUAE chete asiwo, Kingdom of Saudi Arabia, MENA, Central Asia, neEurope. Muenzaniso wekambani dzavanotarisira: Banana Republic, Bershka, Costa Coffee, Stradivarius, Topshop, Zara uye vazhinji zvimwe ku Dubai.
Al-Hokair Group - Jobs in Dubai
Mukufananidzira kumwechete, iyo sangano rave ndiro zita rokutanga muUnited Emirates uye Saudi Arabia. Kutaura chinhu pamusoro peKatar iyo pazvinouya mupfungwa nokuda kwebasa kuMiddle East. Sezvo kutaridzika kunouya kunyika yeArabhiya inokurudzirwa kuti zvikure zvakanaka. Izvo zvakakosha kune tsika yekambani boka rakasimbiswa mu1975 zvakare zvakare kuisa mari mubhizinesi rekuvaraidza uye kugamuchira vaeni pasi pekutungamirirwa kwaSheikh Abdulmohsin Alhokair. Izvozvi zviri mupfungwa Pamakumi emakumi emakore e5, yapfuura mapoka eboka racho akawedzerwa kuti kusimbise kusvika kune zveZimbabwe zvinotarisirwa huri muUAE. Chimwe chinhu chinokosha neAl-hokair ndechokuti vane 79 hoteli dzakapararira muUnited Emirates, Saudi Arabia, uye Qatar. Al hokair mapoka anopa iyo basa rekuvandudza vanoenda kune dzimwe nyika nevana MBA dzidzo.
Dubai Jobs - Ericsson Company
Mune rimwe marenga, Ericsson kambani ine system mukati nzvimbo nokuda kwemabasa ose eArabic. Kuti vataure neimwe nzira, ivo zvino vari kuhaya mainjiniya uye vanogadzira muDubai. Nepfungwa dze nharembozha kugamuchira izvozvo rinoita kuti bhizimisi rikure saka kambani inohodha vanhu vakanyatsobatana neiyo tsika nefoni mbozha WhatsApp vanogadzira. Zvakakosha kuti uzive izvi zvinogonesa vatsva vanotsvaka basa kuti vabudirire musangano ravo rinokurumidza-rakafambisa uye rakaoma.
Zvinoshamisa kuti kambani iyi achiri kushanda mukati memusika wepasi rese. Nezvakanaka, kambani yakagadzira kusimudzirwa kwevashandi vose. Saka zvinoita kuti zvibatsire kushandiswa kwepamusoro kuwana mukati mekusimudzira imba kunyoresa nyore. Ericsson ndeimwe yemakambani akakurumbira mumapurani ebhurusesi ekubudirira.
Ericsson kambani inogara ichibhadhara vatariri vatsva. Kunyanya kana uri kutsvaga kutengesa mabasa muUAE. Iyi ndeimwe yemakambani makuru kunotanga kushanda nawo. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, unofanira kutanga kutsvaga webhusaiti yavo.
Dubai Jobs - Omnicom Media Group Mena
Chimwe chinhu chinokosha nokuda kwebasa reku Dubai inogona kuva Omnicom Media Group (OMG). Iyo kambani inoda vashandi vayo kuti vafarire basa rakanaka-hupenyu hwehutano mukati meimba. Panzvimbo yakanaka, OMG inotungamirira vanhu vanoongorora mazano avo pachavo. Iyo inobvumira vashandi kuti vanyore zvakanaka uye zvisakarurama magwaro pamusoro pezvimwe zvinonetsa zvine chokuita nebasa ravo. Omnicom Media Group inonyanya kuisa pfungwa pamabasa-hupenyu hutsika.
Chinyorwa chinonyanya kusimbisa chevatungamiri vavo chinoita kuti kambani ione sevatungamiri vepamusoro masangano apo mushandi anofanira kusanganisa Mararamiro ehupenyu, utano, uye hukama hwakanaka kune imwe kambani yeMiddle East tsika inoshamisa. Kuti uise imwe nzira, sangano zvakare anofarira vashandi vechokwadi vatsvene nekuzvipira, kunyanya kubva kuvakuru vakuru veOmG, vanoti GPTW Institute.
Uyewo, shandisai Omnicom Media Group Management pane LinkedIn
Dubai Jobs - DHL Global Logistic
DHL Jobs ku Dubai, pfungwa inowanzorambwa automotive company jobs in Dubai iri kungoisa basa rekushandira uye kumirira rubatsiro. Kazhinji kutaura naDHL iwe uchawana chombo chipi nechipi chaunoda kuti uve nevatori veku Dubai munzvimbo yeAlex Airport jobs. Kuti uise imwe nzira, kambani inokuratidza kuti ungatanga sei basa rako idzva mukati memavhiki. Kufupikisa chikumbiro chako naDHL. Munhu wose ane mukana wekushanda nemhando iyi companies jobs in Dubai.
Mukupfupisa nebasa iri reDhailand rekushanda, iwe une mukana wepamusoro wekubudirira kwekuita Dubai uye kufamba. Kune chikamu chikuru, DHL inopa nyore nyore kushanda kwevanotsvaka basa. Panguva ino, kambani inokupa mazano pamusoro pekunyora kushanda kwekutsvaga nekambani kune webhusaiti yepinduriro mhinduro dzinowanzobvunzwa pamusoro pemamiriro ekushanda mukati DHL company. Munyaya iyi, Zviri nyore kuwana basa mu Dubai.
Nokukurumidza kana kuti gare iwe unofanira shandisa CV yako kuti iongorore to Mabasa ePepsiCo kambani. Munguva yakakodzera PepsiCo ichakushevedza iwe. Chero bedzi iwe wakanyoreswa navo iwe uchazoziviswa nezvezvingaitika mune ramangwana muUnited Emirates. Kunyanya kana iwe uchitangazve unyanzvi hunoenderana nematambudziko ekambani. Pakupedzisira, kambani yacho inobhadhara kwete muA Dubai chete asiwo pasi pose. Somuenzaniso kune mabasa anotsvaga kubva kuSouth Africa. Panguva ino vashandi vePepsiCo vanoshanda nesimba zvakaoma kupa vanhu vanhu vepepsi vekutanga. Semuenzaniso, Pepsico mushandi uye vakuru vakuru vanowanzova nekuchiva uye kudya kunodiwa nevatengi.
Dubai Jobs - IYE Imwe Simba Dubai
Iye Shandura Nyika nekambani yefenicha mu Dubai. Pakati penzvimbo yekutengeserana mabhizimusi, vose vanotsvaka basa vanofunga kuti kuwana basa mu Dubai ine chinangwa chikuru kwazvo. Imwe kambani inoda kuchinja nyika nekuita kuMiddle East nzvimbo yakanaka. Parizvino nguva kambani inotarisira vanhu vari kushanda nemwoyo yavo. Tumira Resume yako uye tsamba inovhara kumakambani eHurumende. Imwe kambani inotsanangura zvakajeka nzvimbo uye nyika yaunenge uchikumbira.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, mushandi aneIye kambani ine chiratidzo chakafanana nevamwe vanogovana maitiro ekukosha munyika yefamani. Rudo IkuMiddle East, Tora chinhu chakaitwa uye tenda iwe pachako. Nezvikonzero nekambani iyi zuva roga roga iwe unoda kutevera maitiro aya. Zvinoshamisa kuti iwe hausi kunyange kuedza kushandisa kana iwe hausi iye munhu. Yakanaka chaizvo yekambani vatariri vari kutsvaga basa neA MBA.
Mabasa mu Dubai - Iyo ndiyo nzvimbo yakanakisisa yebasa muUAE
Kune chikamu chikuru, IYE kambani kuva mumwe wezvakanakisisa uye anonzi 7th Best Workplace munzvimbo yeAsia uye akavhota UAE's No.1 Local Mushandi wevashandi vemabasa kuMiddle East. Panguva imwecheteyo, Iyo ichava 2nd Yakanakisisa Nzvimbo Yebasa kubvira 2016 pa WhatsApp Group. To tanga basa rako nekambani yakanakisisa mumusika wekutengesa. Unogona kuwana zvakanaka kwazvo marketing jobs in Dubai. Zvese zvekamwe kamwe kambani zvinotora iwe kuti uve chikamu cheinonakidza yekutengesa uye kushambadzira timu kuti iwe ugone vabatsire kuti vachinje nyika yeArabic.
Dubai Jobs - Uyai neDell Team mu Dubai
Join the Dell Team, Tanga Basa paDell kamwe kamwe yekambani yakanakisisa munyika kune vashandi vePakistani. Nenguva isipi paDell web site webasa webasa mu Dubai unogona kuwana kusingaperi mukana webasa rePakistani muDhaibha. kupi kunetsa uye mubayiro webasa kuAU? Izvo zvakakosha kuti uzive Dell ane mukana pasi rose muIndia, Europe, USA uye Kanadha. Imwe pfungwa yakakosha nekambani iyi a boka revashandi vemunyika dzakawanda.
Chimwe chinhu, kambani inobhadharwa nekutengesa kwakasimba uye kushambadzira kubatanidzwa mukati-kunze. Nezvo mupfungwa mupfungwa, tsika yakarongeka ku 2019 innovation kubhadhara uye nekunyatsoshandisa uchishandisa recruiters mu Dubai. Nokuti vanotya kuti makwikwi achavarwisa Dell yakaumbwa newebsite yebasa rakasimba mu Dubai. Saka vanhu vakatsaurirwa vanoita basa ravo rakanakisa uye vachityaira kutengesa uye IT kubudirira kune mumwe mutengi muDell UAE.
Dell Jobs Vacancies kune vanoita mabasa emarudzi munyika yeUAE
Kusvikira pakuguma, iwe unogona kuwana mabasa muDhaibha neDell yakadai semabasa ekudhinda, nzvimbo dzekutengesa muAsia, mainjiniya basa muUAE, mari yemunharaunda munzvimbo, Mutongi Dzidzo uye basa muDell, Vatungamiri vepamusoro, maitiro emabasa, vanhu uye iwe unogona kuva mumwe wevatori veDell nokuda kwemabasa muDhaibha nemamwe mabasa akawanda muEurope uye kuMiddle East.
Zvinoshamisa iyo kambani ine simba rakasimba pane teknolojia. Uye isu tiri kunyora pane iyo blog yedu kuMiddle East. Chinhu chokutanga chokuyeuka chinomhanya Dell nokuti vanobhadhara mahofisi emabasa akanaka mu Dubai. Mukunyatsotarisa, basa ravo i100% yevashandi vemarudzi ose muUAE. Dell kambani inogadzira hutsika hwakasimba pamabasa ekudhinda mu Dubai, uye nzvimbo dzakasiyana-siyana uye dzinosanganisira nzvimbo dzebasa uye dzinotarisira nzvimbo dzakanaka dzebasa ku Dubai.
Jobs in Dubai - Apparel Group
Dubai Jobs mu Apparel Group kupa iyo isangano rakasimba kuitira kuti ave mutungamiri mune imwe nzvimbo inokurumidzira uye yebhizimisi nzvimbo yeUnited Emirates. Chikwata cheboka rebasa nde tanga nekuvaka nekukura kwakasimba mubasa rako. Nezvozvi mupfungwa, kubudirira kweApparel boka re Brands ndivo vatungamiri vavo nevashandi. Kazhinji kambani mukati memasimba, kushingaira muhofisi uye ruzivo mukati mezvikwata zvekutengesa. Ikambani inoendesa mberi zvakarongwa maratidzi akadai saCalvin Klein, Cath Kidston, Dune London apo vanofambira mberi kutengesa mune nzvimbo inokurumidza uye inofadza yokutengesa muUnited Emirates.
Apparel Group mabasa muDhailand City uye Abu Dhabi
Chimwe chinhu chinonyanya kukosha neApparel Group ndechekudzidzira pasi rose purogiramu muUAE. Kunyanya kambani inotarisirwa kugovera vashandi uye vatsva vanodzidza nekunzwisisa zvizere zvemabasa emafambi muUAE uye mikana yemabasa inowanikwa kuMiddle East mune zvekutengesa. Nechinangwa chekumuka kwevashandi vanofanirwa nehukuita chikwata chekuchinja mafambiro mukati mekambani.
Kune rumwe rutivi, kambani chaizvoizvo kubatsira kuwana basa uye unyanzvi hunodiwa kuti utange basa idzva muApparel Group. Zvakakosha pamusoro pemararamiro ehupenyu nokuda kwebasa rinokurudzira mune zvekutengesa iwe unofanira kudzidza zvakawanda pamusoro peboka muchidimbu. Senyaya yechokwadi, kambani rine mikana yekudzidzira muDhailand City uye Abu Dhabi, kuti uwane basa neboka rinokumbira enda kutora Chikamu chebasa reGoogle.
Dubai Jobs - Careers at MasterCard
MasterCard imwe ye iyo yakanakisisa teknolojia yekambani muUnited Emirates kuti varege kutaura nezvekubhadhara kwenyika bhizimisi mabhizimusi avo vanotarisira. Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi MasterCard iyo nhamba yeNoxNUMX uye inoshanda munyika inotengesa kubhadhara mari. Uye kushandiswa kudarika 1 yedhipatimendi rekutengesa mukati me network mazuva ose. Kune rumwe rutivi, MasterCard vatengi vanobatanidza kubva kuMiddle East, Europe, Canada, Asia, uye US.
Iyo kambani yakasiyana nedzimwe nzvimbo dzezvemari nokuti inoshanda zvakasimba. Panguva imwecheteyo kambani inotanga nhoroondo dzevatengesi, dzichibatsira hurumende masangano mukati memamiriro emabhizimusi. Kusiyana nekubhadhara, kambani inoita mabhizimisi mune dzimwe nyika dzinopfuura 250 nenzvimbo dzakadai seQatar neUAE. Zvechokwadi, maScardard zvigadzirwa uye zvinogadziriswa ndizvo zvakanakisisa munyika. Chaizvoizvo, kambani inewo Basa rekushandira Dubai rakawanikwa mu2018.
Career in Splash - Top Companies kusvika Shanda ku Dubai
Zvechokwadi, 14 Nyika dzichishanda uye izvo kusanganisira avo vakanakisisa vemabasa muMiddle East, Africa, Europe uye Canada uye zvakare zvakare muIndia pasi. Zvakakosha kugona kune umwe neumwe Dubai Job search company Iva nechokwadi chokuti munhu wose anogona kuwana basa uye ave nhengo yeboka neSplash. Pamusana pemaonero akashata anoparadzanisa vashandi vose vane simba uye mufaro kushanda Dubai.
Mukufamba kwenguva kambani muMiddle East nguva dzose tichitsvaka vanhu vane chido uye vanoda kugadzirira kuMiddle East. Kazhinji kutaura pamusoro peizvi nzvimbo dzebasa muUAE kambani inoita kugadzira nekukurudzira. Pashure pezvose, kana wakagadzirira kutsvaga zvitsva uye unoda kufara uye utange basa mumakambani makuru kushanda kwe2015 - 2016. Kupwanya kuita a musiyano mune simba rakaoma kuMiddle East.
Dubai Jobs Vacancies - PR Agency Weber Shandwick
Basa iri paPPR Agency Weber Shandwick. Kazhinji kutaura basa pa Weber Shandwick ndiyo nzira yakanaka kwazvo yokutanga basa muUAE. Mikana inouya inobva kuDaily City. Zvinhu zvose zvinotaridzwa ne Weber Shandwick zvinogona kukushamisa iwe kunyange iwe uri weIndia kana Pakistan. Nenguva yakawanda kushingaira kunotsvaga WhatsApp Group kuunganidza mufoni, pasina kunonoka nevanosangana navo mune zvemagariro evanhu, kazhinji, kambani inotarisa zvinyorwa vanyori uye yakabatanidzwa nhau IT people. Sezviri nyaya, kambani inoshanda pedyo nevatori vemabasa mu Dubai.
Mabasa muDhaibha kune vatsva vanodzidza Estée Lauder
Chero bedzi paunoshandisa mabasa muUAE edza Estée Lauder website yebasa mu Dubai basa rako idzva rinogona kutanga pano uye iyi yakanyatsosimbiswa yakasimba. Kusvikira panguva ino, Estée Lauder vatengesi venguva inenge vari nguva dzose vanoridzirwa vashandi vari muzvitoro zvinoshandiswa. Kutanga paunokwanisa kushanda pane chero kupi zvako mu Dubai, Abu Dhabi, Doha nevamwe vakawanda. Sei uchifanira kusarudzwa kuti ubhadzwe muchitoro uye Estée Lauder ?. Zvichipa pfungwa idzi, unoda kuda kutengesa uye kuva nhepfenyuro yakakura inotarirwa ku Dubai. Muchidimbu, kana iwe uri mutsva unodzidza kubva kuchikoro chesekondari kana kana uine ruzivo rwekare mune zvekutengesa kana ruzivo rwevashandi vekambani iyo kambani ndiyo yakanakisisa kutanga nokuda kwebasa rako guru mu Dubai.
Ita maona mashoma mashoma nekambani iyi:
Zvizoro Chesheni meneja nzvimbo
Mabasa mu Dubai - Hilti Careers
Company in Dubai neHiiti basa webasa reku Dubai. Nokukurumidza kana kuti gare iwe uchadaro Iva wakagadzirira kuwana basa idzva. Iwe unofanirwa, kutanga nemabasa, emabasa ekupedzisira muHilti. Munguva iyi, nechokusimba, iwe unogona kuisa mabasa mabasa panzvimbo yekuti kutsvaga zvimwe zvematongerwo emabasa mu Dubai. Nechinangwa ichi kutsvaga nzvimbo yebhizimisi mabasa kana kunyange vane nyika inotarisa basa muUAE. Kune rumwe rutivi, kana iwe usingakwanisi kuwana basa rinopa ikozvino iwe unofanirwa kuisa CV yako yepamusoro yakakwana yebhengi.
Mune tariro yekuti yako dream job inouya pamusoro ndapota ramba uchitarisa vhiki yega yega Hilti Kutarisira webhusaiti sekambani inogara ichigadzirisa mabasa mukati Dubai nevisa kana pasina visa mikana. Sezve nyaya, iwe unogona skugumisa basa rakanaka chaizvo remabasa uye kungotarisira ramangwana rekushanda.
Jobs Dubai - Mars Careers
Nechinangwa che basa search muEmirates basa nebasa nekambani yeMars Ndizvo zvauri kutsvaga maererano nemabasa. Nezvo izvi mupfungwa, kambani ine nzvimbo dzakawanda mhiri kweAEE nyika nepasi rose. Iyi webhusaiti yebasa reDubai inoda kuti iwe ugare yakabatana nevamwe vanhu vasingazive nzira yekuwana basa mu Dubai. Vashandi veJobho vanoda basa ravo rokudhinda muNairobi network. Nekutya kuti basa rekushanda richatora nguva.
Iwe unongoda kuisa yako email-id uye taura mazwi mashomanana pamusoro pako uye ruzivo rwebasa. Nenzira dzose, the kambani ichachengetedza vashandi vose basa pamusoro pekuuya kwekupa mazano kune maZvito emabasa e2019 anofanana nehupenyu hwako. Mars ndiyo webhusaiti yakakurumbira zvikuru muUnited Emirates. Uye kunyanya, iwe unogona tsvaka basa navo kuburikidza neHR recruiters.
Nechinangwa che kubatanidzwa mu Dubai, Joinha yedu yakasarudzika yeWhatsapp Boka kana ingo wedzera yako email nhoroondo pazasi Nechinangwa ichi, timu yedu ichakwanisa kuseta zvekuzivisa zvebasa Hotel industry industry jobs. Mafuta neGasi mabasa mu Dubai, IT Career muUAE, Sales uye marketing marketing vacancies. Kuti uzo tsvaga vadzidzisi vekudzidzisa mabasa mu Dubai, uye zvakare kutumira zvinhu zvako kune mamwe masangano emabasa mu Dubai. Muzvakanaka Employment industry nekuvandudza, iwe unogona kugamuchira nekungowedzera email kana kutaura kune chikamu chekubatana navo.
Zvinokosha kuti tione ne Dubai yedu kuwana basa redu nderokuti isu tiri nepamusoro yakarongwa nevatori vemabasa mu Dubai. Dubai City Company ine vashandi vemunyika yose kubva kuUnited Emirates neKatar. Tichifunga nezvekambani dzakanakisisa muDhaibha, vatengi vedu vanoda kuhaya vanoshingaira vanobva kuIndia.
Mabasa mu Dubai ne Dubai City Company
Chinhu chokutanga chokuyeuka shandura basa rako uye unogona kubatana pakarepo Dubai Jobs. Kana iwe ikozvino uri kushanda patsva kubva kumajunior ari munyika yako. Edza kutamira kune vakuru vakuru mabasa mu Dubai. Kuisa imwe nzira nzira yekubata basa mumapazi sekuita mabasa ekugadzira ku Abu Dhabi, HR Director iri basa mu Dubai, admin yakapusa basa rokutyaira mutori wenzvimbo kungotanga kutanga, hotera manejimendi mabasa muDubai, offshore chinzvimbo basa nzvimbo, pabasa pamhenderekedzo mu Abu Dhabi, kutengesa & kushambadzira mabasa epamusoro muDubai, mabasa ekuchengetedza muGCC.
Taura nesu pano nokuda kwako tsanangudzo yekubatanidza kuunganidza ku Dubai indasitiri mabasa mikana patiri WhatsApp Groups. Imwe pfungwa inokosha nekambani yedu ndeyekuti iwe uchawedzerwa kune boka revaridzi mu Dubai. Pamwe nehuwandu hweporofita hwako huchava muDaily recruitment database. Nezvakanaka, hauzombozivi kana vatungamiri vekambani yekambani yedu vachanyatsoonana newe.
Dubai City Kambani ikozvino ichipa zvakanaka guides Mabasa muDubai. Boka redu rakafunga kuwedzera ruzivo rwemutauro wega wega wedu Dubai expats. Saka, mune izvi mupfungwa, iwe zvino unogona kuwana mazano, mazano uye basa muUnited Emirates nemutauro wako.
Ndapota sarudza fomu yakakodzera
Dzvanya apa kuti uvhure Fomu
Kuwait - Chii chakakodzera
Maitiro ekurenda mota kunze kwenyika (uye nezvimwe). Nhungamiro yeIxpats.
Ndezvipi zvinyorwa zveKuwait? Visa kuKuwait Gwaro rinopa vagari vemuPoland kutamira kunzvimbo yeKuwait vhiza, inogona kuwanikwa kuKuwait Embassy muWarsaw. Imwe nzira yekutora gwaro (kwenguva isingasviki mwedzi ye3) ndeyekutenga panhandare yendege kuKuwait, pasina mamwe marizve. Vabati vevhoti yekushanya yeKuwait vanogona kungova varidzi vepasipoti inoshanda kweanenge mwedzi ye6 kubva musi wekubva. Iyo vhiza yekubhadhara ndeye 3 SD, iyo kukosha kwayo kunochinja-chinja pa35-40 PLN. Kuwait imarii yekutora? KWD to DZD Maonero pamusoro peiyo Kuwaiti Bay yemahombekombe, achipenya mukati mezuva rekuvira, yakakomberedzwa nemvura yePersian Gulf, yakashongedzwa nezvikepe uye ngarava dzinodzoka kuchiteshi, zvechokwadi zvichayeukwa kwenguva refu neavo vachange vaine mukana wekuyemura iwo maonero nemeso avo. Uye zvakare, rwendo rwekuenda kuKuwait mukana wakanaka kuona iyo Sainzi Center, iyo huru aquarium mune iyo yose Middle East, umo mhando dzezvisikwa zvegungwa zvinogara muArabian Gulf, kusanganisira shark, dzakadzika. Kuti uone izvi zvese zvinokwezva nemaziso ako pachako, usati waenda, iwe unofanirwa kuyeuka mhinduro kumubvunzo "Imarii iyo Kuwait?" - Kuwaiti yemari yeWindows ichapa vafambi rwendo runyararo uye rwakachengeteka.
Mari ipi yandinofanira kuenda kuKuwait?
Kunyoresa Yemahara neBayt!
Tsvaga Basa Ririnani!
Handinzwi ndine rombo
Hapana rombo nhasi
Tora mukana wako ku kuhwina Jobho muDubai!
Vanenge munhu wese anogona kunyorera kuDubai Job Lottery! Pane izvo zviviri chete zvinodiwa kuti munhu akwanise kuwana UAE kana Qatar Basa: Shandisa iyo Dubai Visa Lottery kuti uwane kunze kwekungodzvanya mashoma kana iwe uchikwanisa basa reVisa. Chero expatency yekune dzimwe nyika, asiri UAE yenyika, inoda visa rekugara kuti ugare uye ushande muDubai. Nerotari yedu, iwe uchahwina iyo Kugara zvakare / Basa rekuona rinokutendera kuti ushande muDubai!
Edza rombo rako
Kana iwe uchikunda basa muDubai iwe unofanirwa kunyoresa ako ruzivo.
Your coupon code inoshanda for